कोरोनाबाट थप १ जनाको मृत्यु – सडक मिडिया
मृत्युपछि उनको स्वाब संकलन गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनमा पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । शनिबार आएको उनको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनलाई उद्धृत गर्दै जगदुल्ला गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैसीले जानकारी दिए ।
उनको यसअघि नै दाहसंस्कार गरिसकिएको छ ।
Previous Post: कोरोनाबाट मृत्यु भएकाे शव व्यवस्थानसम्बन्धी बन्यो यस्तो कार्यविधि
Next Post: नेपालमा बाबा रामदेवको योग प्रतिबन्ध गर्न सांसदको माग
अर्का अभिनेताले पनि रोजे सुशान्तको बाटो…हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ! 5,081 views
नेपालमा न्युज च्यानल बन्द भएपछि भारतीय मिडियामा खैलाबैला, कसले के लेखे? पढ्नुहोस 2,717 views